कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई सहयोग – Sadarline
नरैनापुर (बाँके) : कोरोनाबाट मृत्यु भएका युवकको परिवारलाई नरैनापुर गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह शुक्रवार मृतकको घर पुगेर परिवारलाई क्रिया खर्च वापत ५० हजार रुपैयाँको चेक प्रदान गरे ।
मृतक युवकका बुवा, आमा र श्रीमतीलाई उनले चेक हस्तान्तगरण गरे । हाल ५० हजार दिएको र घर बनाउन गाउँपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भन्दै अध्यक्ष शाहले आफुले पनि व्यक्तिगत ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे ।
उनले खाद्यान्न, तेल, नुन, दाल, झुललगायतको राहत सामग्री पनि मृतकको परिवारलाई प्रदान गरेका थिए । त्यस अवसरमा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मसुद अहमद शाह, गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख विजय यादव, प्रशासन प्रमुख भरत महतो, सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्र लगायत उपस्थित थिए ।
गत जेठ ४ गते क्वारेन्टाइनमै बसेका बेला वडा नम्बर ५ नयाँ बस्तीका २५ बर्षीय युवकको मृत्यु भएको थियो । मृत्युपछि उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो । भारतको मुम्बइबाट आएका उनी भगवानपुरको दिपेन्द्र प्रावि क्वारेन्टाइनमा थिए ।
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : बाँकेमा एक मिनी ट्रक दुर्घटनामा परेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित शम्शेरगञ्ज नजिक रा १ ख ९३५ नं. को मिनी ट्रक दुर्घटनामा परेको हो । दाङको घोराहीबाट टमाटर लिएर नेपालगञ्ज आउँदै गरेको उक्त ट्रक सडकको खाल्डोलाई बचाउने क्रममा ट्रक अनियन्त्रित भई पल्टेको प्रहरी चौकी […]